Matsiatra Ambony : kaominina 15 efa manana fiahiana ny fahasalamana | NewsMada
Matsiatra Ambony : kaominina 15 efa manana fiahiana ny fahasalamana
Hatomboka manerana ny Nosy ny tolotra fahasalamana ho an’ny daholobe aorian’ny fanamarihana ny Andron’ny fahasalamana any Fianarantsoa. Manana tombony ny faritra Matsiatra Ambony satria efa misitraka fiahiana ny fahasalamana.
« 15 ny kaominina ao anatin’ny faritra Matsiatra Ambony manana fiahiana ny fahasalamana miaraka amin’ny ONG ary napetraky ny vondron’olona eny ifotony tohanan’ny mpitantana ny kaominina », hoy ny fanazavan’ny talem-paritry ny fahasalamana ao Matsiatra Ambony, Razafimandimby Jacky, omaly, teny Ambohidahy. Manao latsakemboka isam-bolana na isaky ny telo volana arakaraka ny kaominina ny mponina hitsinjovana ny fahasalamana rehefa maitsoahitra ka tsy ampy ny vola eo am-pelatanana. Rehefa tsy misy ny vola azo soloina vokatra ny fandraisana anjara iantohana ny fahasalaman’ny ankohonana. Mametraka komity manokana ny vahoaka mikirakira ny tahiry ary misahana ny asa rehetra. Ho an’ny CSB sasany, afaka miantoka ny saran’ny fandefasana ny reny mpiteraka na fitsaboana hafa tsy vita eo an-toerana ny mpiandraikitra. Ho an’ny faritra Matsiatra Ambony, manana ezaka hametraka ny fiahiana ny fahasalamana amin’ny kaominina 75 tsy mbola misitraka izany ny tomponandraikitry ny fahasalamana. Ezaka ny hanitarana ny tolotra amin’ny kaominina dimy isam-bolana. Satria efa manana traikefa ny faritra Matsiatra Ambony, anisan’ny faritra telo nametrahana voalohany hanaovana andrana amin’ny Tolotra fahasalamana ho an’ny daholobe (CSU) ny mponina ao amin’ny distrikan’Ambalavao. “Ireo kaominina efa misitraka ny fiahiana ny fahasalamana rahateo hivadika amin’ny rafitra vaovao fotsiny. Tombony ny fiakaran’ny mpikambana ka mety hihena ny sorabola aloan’ny tsirairay”, hoy ny talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin’ny minisitera, Rakotoarivony Manitra.
Hosantarina mandritra ny fanamarihina ny Andron’ny fahasalamana any Fianarantsoa ny 6 sy 7 avrily izao ny Tolotra fahasalamana ho an’ny daholobe (CSU).
Aorian’izay, hojerena manokana ny fikarakarana ny mpiasan’ny fahasalamana mampihodina ny CSB I sy CSB II. Raha olona tokana no miasa ao hatramin’izay ka voatery akatony ny CSB rehefa manao vaksiny eny anivon’ny fokontany ny mpiasa, hampiana ny isany hanatsarana ny tolotra fitsaboana.
Mandrindra ny fametrahana ny CSU ny OMS
Mandray anjara amin’ny lafiny teknika amin’ny fametrahana ny CSU ny Sampandraharahan’ny firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS) izay manamarika ny faha-70 taonany amin’ity taona ity. Manampy ny minisitera amin’ny fandrafetana ny toromarika teknika ny OMS. Manetsiketsika ny mpiray ombon’antoka koa izy ireo ary mandrindra ny fametrahana ny paikady ho an’ny CSU, araka ny nambaran’ny tomponandraikitry ny fandaharanasa ao amin’ny OMS, Isiraely Saina. Ho an’ny roa taona, mahatratra 14 tapitrisa dolara ny tohana omen’ny OMS an’i Madagasikara entina hanatsarana ny fahasalamam-bahoaka amin’ny ankapobeny.